KOOXDA IMBEGHATI IYO QM: xiriir intee la’eg ayey leeyihiin ? | Wargeyska Xog-Ogaal
KOOXDA IMBEGHATI IYO QM: xiriir intee la’eg ayey leeyihiin ?
URURKA QARAMADA MIDOOBAY:
Waxay ilaa iyo intii ay burburtay Dowladii dhexee Soomaaliya aad ugu lug laheyd arimaha bani’aadanimo, dhaqaale iyo waliba siyaasada ee Dalka Soomaaliya, waxay 1993dii xoog ciidan ku soo galeen Dalka inkastoo labo sanno kadib ay fashilmeen oo ay ka soo baxeen, ka dib markii uu dagaal qaraar dhex marey iyaga iyo Jabhadii USC ee uu horkacayey Dagaal-ooge Maxamed Faarax Caydiid.
QM hadafkeeda siyaasadeed inta badan wuxuu ku xiran yahay midka Mareykanka oo siiya lacagta ugu badan ee ay ku shaqeyso, meeshii uu Mareykanku hiifo sidoo kale iyaduna way hiiftaa, Wadankii uu Mareykanku jecelyahay sidoo kale faraha lama gasho oo way amaantaa !.
Arimaha nabadgelyo la’aanta Dalka Soomaaliya ka jira waxaa sida dhabta ah u sabab ah joogitaanka Ciidanka gumeystaha/shisheeye ee Xabashida laakiin QM iyo Wakiilkeeda Soomaaliya indhaha ayey ka meer-meeriyaan mana soo hadal qaadaan, mar-marka qaar waxay si jilicsan u dhahaan waa in la helaa Ciidan Afrika ka socda oo midka Itoobiyaanka ah bedelo waa in la diyaariyaa, Laakiin sida muuqata taasi suuro gal maaha oo waxaa jira laba arimood oo diidan.
Mid waa ciidanka Afrika ma haystaan dhaqaale iyo qalab-ciidan oo ay ku aadaan Soomaaliya.
Mareykanka oo sida loo maleynayo aan ku qanacsaneyn inay Ciidanka Xabashidu meesha/Dalka ka baxaan waayo wuxuu u arkaa in haddii ay soo baxaan xabashidu ay Xukunka Dalka la wareegi doonaan xoogaga wax-iska caabinta bahoobay (Maxaakiimta, Al-shabaab iyo guud Jabhadaha Islaamiyiinta ah) taasoo uu Mareykanku qaadan karin.
Xaalka adag ee uu maanta shacabka Soomaaliyeed ku jiro waxaa la oran karaa qayb ayey ka tahay QM waayo waxay Aqoonsi Dowladnimo siisay Koox Dagaal-Ogayaal/Dambiilayaal ah hadana wax-matarayaal ah, Kooxdan oo sida runta ah dambiyo badan ka galay Mujtamaca Soomaaliyeed 18kii sanno ee la soo dhaafey. QM waxay kaloo siisaa mushaarka Xil-dhibaanku sheega Kooxdaan ee uu fadhigoodu yahay Baydhabo, waxay u diyaarisaa ama u fududaysaa safarada ay Dalka dibadiisa ugu yaboohsi tagaan.
Kooxdan Imbeghati waxaa gacanta ku sameystay Taliska Xabashida oo dantooda tahay inay gumeystaan Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed, Xabashidu waxay taageero niyad iyo dhaqaalaba ka helaan Dowladaha reer Galbeedka gaar ahaan Dalka Mareykanka.
Waxaa la yaab leh inuu Shirkii Qaramada Midoobay ka qaby qaato Wasiirku sheeg Jaamac Jangali oo ah Wasiirka Arimaha Dibada Dowladku sheega kooxda Imbeghati, ninkani xilkaa waa uu Iska casilay mana aha sharciyan Wasiir ku sheeg, sidaa oo ay tahay Shirka QM inuu matalo Mujtamaca Soomaali waa loo ogolaadey, sababta kaliya ee loogu ogalaaday ayaa ah in la muujiyo in Kooxdani aqoonsi Dowladnimo leedahay.
Jangali ayaa la sheegayaa shirkaan inuu iskiisa u tagey kadib markii uu ka baaqdey Madaxa Kooxdiisa Imbeghati C/laahi Yusuf oo ku xayirmay Muqdisho, kuna adkaatey inuu ka dhoofo garoonka Diyaaradaha Aden Cadde oo ay digniin inuu xiran yahay ka soo saareen Ururka Al-shabaab.
Dhibaatooyinka Shacabka Soomaaliyeed lagu wado waxaa la oran kaaraa waxaa Injineer ka ah QM gaar ahaan aqoonsiga iyo taageerada dhaqaale ee ay siinayso Dagaal-ogaal in badan dambiyo dagaal ka galey Dadka Soomaaliyeed, oo aan haysan kalsoonida iyo taageerada shacabka laakiin raba inay xoog iyo jujuub ku haystaan shacabka iyagoo kaalmo ka helaaya gumeystaha/cadowga xabashiga.
Kaliya Kooxda Imbeghati ma aha dhibaatooyinka jira laakiin siyaasad xumada dadka hormuudka u ah dhamaan mujtamaca Soomaaliyeed, hadey tahay mid dhaqameed, mid Diineed iyo mid dhaqaalaba.
← LABA NIN: oo Muwaadiniin Soomaali ah oo lagu xiray Jarmalka. XUMAHA IYO SAMAHA: markey xumaantu adkaato maxaa dhaca ? →